होसीयार ! जाडोको मौसममा यी ५ रोग भएका ब्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् अदुवा – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/होसीयार ! जाडोको मौसममा यी ५ रोग भएका ब्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् अदुवा
अदुवा प्राय मसलाको सुचीमा समावेश हुँदैन तर यसको उपयोगीता भने कम छैन । यसको स्वाद मसलाको भन्दा केहि कम हुदैन । विवाह, वर्तबन्ध,भोज होस वा दैनिक जिवनमा होस अदुवाको प्रयोगले भोजन स्वादिष्ठ बनाउनुको साथै चिसो हुनबाट जोगाउछ पवित्र अदुवा:अदुवा संस्कृत शब्द अर्धकको अपभ्रंश हो यसले सुख्खापन हटाएर वृद्धि समेत गर्दछ । अदुवालाई सात्विक मानिन्छ र ब्रम्ह्रचारी बौद्ध भिक्षुहरुले पनि यसलाई आफ्नो भोजनमा समावेश गर्दछन् ।
सबै मौसममा ठिक::अदुवा गुणस्तर भनेको भोजनलाई स्वादिष्ठ बनाउनु हो । यसले गर्मीमा शरीर र दिमागलाई शान्त बनाउँछ र जाडोमा चीसो मसलाको रुपमा चियामा पनि प्रयोग हुन्छ । अदुवालाई सकाएर सुठानी बनाइन्छ । जुन महिलाहरु सुत्केरी भएको बेलामा प्रयोग गरिन्छ ।खोकी हटाउने:अदुवालाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । शरीरमा पाचनसंगै कफलाई पनि राहत दिन्छ ।यस्ता केहि समस्या हुनेहरुले अदुवाको प्रयोग गर्न नहुने चिकित्सकको भनाई छ।
१ अदुवा धेरै सेवन गर्दा रगतमा सुगरको मात्रा बढ्ने हुँदा मधुमेहका बि’रामीहरुले पनि अदुवा खानु हुँदैन ।
२ पेटको समस्या छ भने अदुवा सेवन गर्नु हुदैन । अदुवाले शरीरमा एसिडको मात्रा बढाउने हुँदा स’मस्या ब’ल्झन्छ ।
३ महिलाहरुलाई महिनावारीको स’मस्या छ भने पनि अदुवा सेवन गर्नु हुँदैन । र’गतसम्बन्धी स’मस्या छ भने पनि अदुवा नखाँदा नै बेस हुन्छ ।
४ उच्च रक्तचापका बि’रामीले पनि अदु्वा खानू हुँदैन ।
५ गर्भवतीले पनि अदुवा नखाँदा नै ठीक हुन्छ । पछिल्लो तीन महिना त झनै अदुवा खानुहुँदैन ।
६ तौल बढाउन चाहनेले पनि अदुवा नखाएको राम्रो ।औषधि सेवन गरिरहेकाले पनि सकभर अदुवा खानूहुँदैन । किनकि, यसले औषधिसँग मिलेर अझ बढी
स’मस्या निम्त्याउँछ ।